Jennifer Lopez ndiye chiso cheunganidzwa nyowani yeVerace - Nhau
Jennifer Lopez ndiye chiso cheunganidzwa nyowani yeVerace
Jennifer Lopez zviri pamutemo musikana weVersace.
NeMugovera, J.Lo akazivisa pa Instagram kuti aive achimiririra iyo yechiratidzo yeChirimo / Zhizha 2020 muunganidzwa.
pamusoro 500 robert de niro
'Ndiri kufara kwazvo ini ndinogona pakupedzisira kuratidza kuti ini ndiri kumeso kwemushandirapamwe we # VersaceSS20!' Akanyora pamwe chete nemapfuti mazhinji kubva kumushandirapamwe 'Ndatenda kuna @Donatella_Versace uye nemunhu wese ku @Versace nekuona pamwe nekubatana kwako.'
Ndiri kufara kwazvo ini ndinogona pakupedzisira kuratidza kuti ini ndiri kumeso kwemushandirapamwe we # VersaceSS20! Ndatenda kuna @Donatella_Versace uye nemunhu wese pa @Versace nekuona pamwe nekubatana. Mufananidzo: @mertalas & @macpiggott
Chinyorwa chakagovaniswa na Jennifer Lopez (@jlo) musi waJan 11, 2020 na10: 09 am PST
Imba yemafashoni yakagovana yakawanda yemifananidzo yakafanana kune yayo Instagram peji, futi.
'Iyo nyowani # VersaceSS20 yekushambadzira mushandirapamwe inoratidzira shamwari yenguva refu yeImba @jlo uyo akashamisa vateereri ndokutyora internet kuvhara iyo runway show mune iteration yeanoshamisira Jungle anodhinda chipfeko,' yakatumirwa Instagram posvo, ichitaura nezve iyo pop nyeredzi chitarisiko paMilan Fashoni Svondo rapfuura kudonha umo iye akapfeka rokwe rinoyeuchidza iro raaipfeka kuma 2000 Grammy Awards.
Vittorio Zunino Celotto / Getty Mifananidzo / Getty Mifananidzo
Versace akazoti, 'Mushandirapamwe mutsva we # VersaceSS20 kumukira pasimba reinternet nemidziyo yayo yevoyeurism.'
Iyo nyowani # VersaceSS20 yekushambadzira mushandirapamwe inoratidzira shamwari yenguva refu yeImba @jlo uyo akashamisa vateereri uye kutyora internet kuvhara iyo runway show mune iteration yeiyo inoratidzika Jungle yekupfeka rokwe. _ Inotungamirwa na @mertalas uye @macpiggott / @artpartner Chief Creative Officer @donatella_versace Creative Director @ferdinandoverderi Yakarongedzwa na @ kjeldgaard1
Chinyorwa chakagovaniswa na Versace (@versace) musi waJan 11, 2020 na12: 00 am PST
J.Lo, uyo ari kutamba paSupp Bowl halftime show mwedzi unouya, akataura nezve ake anoyevedza green Verace chipfeko achigashira 'Mugovera Night Live' muna Zvita.
'Ndakafamba mumugwagwa kuMilan kekutanga kupfeka rokwe randakapfeka makore makumi maviri apfuura,' akadaro. 'Zvino vamwe vanhu vakati ndinotaridzika zvirinani kupfuura zvandaiita panguva iyoyo, uye handisi kuzvirova - ndizvozvo, munoziva, makuhwa.'
Akapedzisa monologue yake nemumhanzi nhamba achichinjisa tuxedo yake yemupfekero iwoyo weVerace.
Johnny Depp anodzosera kuna Amber Heard's Weinstein Co subpoena mu $ 50M yekusvibisa sutu
Megyn kelly achadzoka rinhi
chris cuomo mukadzi yoga cnn
chris brown achiva baba
janet jackson uye al mana
eve rapper nemurume wake